Ogaden News Agency (ONA) – Edmonton oo Munasabadii 30Guurada Lagu Qabtay
Edmonton oo Munasabadii 30Guurada Lagu Qabtay
Waxaa maanta si heersare ah loogu qabtay magaalada Edmonton xaflad lagu maamuusayey sanadguuradii 30aad ee aasaaska Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya (JWXO) oo ay soo qabanqaabisay jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya ee gobolka Alberta. Xafladan oo si fiican loosoo qaabeeyay ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne badan, madax sare oo kasocota JWXO iyo ninka u tartamaya in uu noqdo gudoomiyaha gobolkaAlberta(premier) mr Thomus Lukaszuk.
Waxaa lagu furay wacdi diini ah oo uu soo jeediyey sheekh Cusmaan kadibna waxaa shirka si rasmi ah u furay gudoomiyaha jaaliyada magaalda Edmonto nmudane Cabdiraage Cali oo hadla kooban halkaa ka soo jeediyey una mahadceliyey dhamaan dadkii kasoo qaybgalay shirkaa iyo xubnihii soo abaabulayba.
Ka dib waxaa shirka lagu soo dhaweeyey isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yusuf Ismaaciil oo si kooban uga warbixiyey jaaliyadahaCanada. Waxaa hadalka qaatay si aad ahna loogu soo dhaweeyey mudane sare oo ka mid ahaa waftigii JWXO ee u timid in ay kala qayb gasho sanadguuradii 30 halgame xaaji Maxamed Ciilmooge oo halkaa ka soo gudbiyey fariintii Gudoomiyaha JWXO, mudane admiral Maxamed Cumar Cismaan, taasoo ku aadanayd sanadguurada 30aad ee jwxo. Shirka waxaa kaloo ka hadlay ninka u tartamaya gobolkaAlbertamr Thomus iyo gabdh kale oo Kanadiyaana, oo ah qoraa magaceedana la yiraahdo Christina oo ka mid taageerayaasha qadiyada shacbiga Ogaadeeniya.
Waxaa barnaamij aad u qiimo badan halkaa ka soo jeediyey aqoonyahanka soomalida ogaadeeniya DR Maxmuud Ugaas, barnaamikaas oo uu ugu magac daray Iftiinka Xoriyada, runtiina umadii meeshaa isugu timid ay aad u jeclaysteen una ogaadeen xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Itobiya. Waxaa sidoo kale hadal gaaban halkaa ka soo jeediyey mudane Xasan Ciise Sheekeeye oo kawar bixiyey guud ahaan xaalada halganka Ogaadeeniya oo uu ku tilmaamay tareen socda ninkii ka hadhana aan loo joojinaynin, halgankana uu sidiil loogu talo galay u socon doono. Waxaa sidoo kale halkaa hadal dheer ka soo jeediyey mudanayaal ka soo jeeda Soomaali weyn, waxayna cadeeyeen maanta in aanay jirin cidkale oo soo celin karta haybadii Soomaaliya oo aan ka ahayn JWXO.
Waxaa halkaa wacdaro aan la soo koobi karin ka dhigay ururka dahlinyarad OYSU oo soo bandhigay dhaantooyin cajiib ah oo gilgilay shacbigii reer Edmonton. Runtiina sanadguurada maanta ka dhacday magaalda Eedmonton waxay noqotay mid taariikhi ah oo uu cadowgu ka naxay inta xoriyada jecelna ku faraxday, iyadoo ku soo dhamaatay guul aan la soo koobi karin.